SAHY MANDATSAK’AINA : Misesilany ny fanararaotaom-pahefana ataon’ireo Zandary sasantsasany
Hatramin’ny fiandohan’ny taona 2020, tsikaritra ny fisetrasetran’ireo Zandary sasantsasany eny anivon’ny fiarahamonina izay namoizana ain’olona avokoa. 9 janvier 2020
Toy ny zava-nitranga teny Ivato tamin’ny fiandohan’ny taona izay nahafatesana tovolahy voatifitry ny Zandary noho ny hasarotam-piaro diso tafahoatra, tao koa ny tranga teny Bevalala Andoharanofotsy ny sabotsy 04 desambra lasa teo izay nahafatesana lehilahy nodarohana Zandary noho ny resaka vola roa arivo Ariary monja tsy voaloa, ny farany niseho tao Dondona Soavinandriana Itasy izay nahafatesana sivily miisa 03 ary koa olona 05 naratra mafy , zandary iray nifanolana tamina mpivarotra trondro no niantombohany. Saika nanamarika avokoa ireo tranga niseho fa fampiasan-kery midika ho fizahozahoana ho tompom-pahefana no naharihariharin’ireo Zandary, hany ka tsy mahatandrina ny tokony hatao intsony ary dia mandika lalàna sy sahy mandatsaka ain’olona amin’ny tsy rariny. Manoloana ireo tranga mahatsiravina misesilany dia mitsipaka sy manohitra tanteraka ireo zava-doza vitan’ireo Zandary ny eo anivon’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena.
Manameloka ny herisetra ary koa handray fepetra hentitra sy mafimafy kokoa ka hampiharana ny lalàna velona. Hamafisin’ireto farany hatrany moa fa ao anatin’ny fanadiovana anatiny ny Zandarimaria ankehitriny, hentitra hatrany ny famotorana tsy hanaovana ki-antrano-antrano. Toy ilay tovolahy namono olona teny Ivato izao dia efa nadoboka eny Tsiafahy.
« Tokony hosaziana faran’izay henjana ny nahavanon-doza », hoy ny Depiote Fy
Nitrangana disadisa tao Dondona, Distrikan’i Soavinandriana tamin’ny 07 janoary lasa teo. Sivily miisa telo no maty, olona 5 hafa naratra noho ny fifandonana. Araka ny fantatra, fahadisoana mihoa-pampana nataona zandary iray miasa ao amin’ny amin’ity tanàna ity no nahatonga ny fifandonana. Nanao antso avo hijerena akaiky ity raharaha ity ny Depiote voafidy tao Soavinandriana, omaly nandritra ny fiarahabana ny Filoham-pirenena noho ny fahatratrarana ny taona vaovao teny Iavoloha. « Tokony hosaziana faran’izay henjana ireny olona manao habibiana ireny satria manao fanararaotam-pahefana mba tsy hamerenan’ny hafa izany intsony.
Tsy vitan’izany ihany fa mety hisy fiatraikany any amin’ny vahoaka koa ny fihetsika toy ireny satria mety hiteraka tsy fahatokisana ny mpitandro ny filaminana », hoy ny Depiote Ramanana Fiainantsoa na Fy voafidy tao amin’ny Distrikan’i Soavinandriana. Notsipihiny nefa na izany aza fa manao efa manao ny ezaka rehetra ny tompon’andraikitra saingy ny « tanàna tsy ilaozan’adala », hoy ny fitenenana. « Tokony ho hentitra isika amin’ny fijerena izay manjo ny vahoaka, maromaro ny famonoana olona tato ho ato izay ary matetika mpitandro ny filaminana hatrany no mahavanon-doza. Mpiasan’ny vahoaka isika ary karamain’ny vahoaka tsy tokony hamono olona » hoy hatrany ny nambarany.
Nifanolana tamin’ny mpivarotra trondro
Raha tsiahivina fohy, nifanolana tamin’ny sivily, mpivarotra trondro iray io zandary io, ny tolakandron’ny 7 janoary. Rehefa tsy afa-po tamin’ny resaka vola ity farany dia nampihatra herisetra ka torana ilay iray. Nihevitra ilay zandary fa maty ilay mpivarotra nokapohiny ka nilefa izy. Tezitra noho izany ireo fokonolona nanatri-maso, ka naterin’izy ireo teny amin’ny Toby sy foiben’ny zandary any an-toerana ilay Mpivarotra trondro sady nikasa hitady ilay zandary izy ireo.
Tsy hita tao ity farany ka notadiavin’izy ireo tany an-tranony indray ary dia tratrany tao tokoa. Niditra amboletra tao avy hatrany ireo fokonolona ka nitifitra ilay zandary ho fiarovan-tenany. Vokany, sivily 3 no maty raha 4 kosa no naratra mafy. Ny roa tamin’ireo naratra dia ratra vokatry ny fifanosehana nandritra ny sahotaka. Ilay zandary kosa naratra teo amin’ny lohany ary potika vokatry ny fifandonana sy ny hatezeram-bahoaka koa ny trano sy ny fanak’ilay zandary.
Efa nisy andraikitra noraisina
Rehefa naheno ity tranga ity moa ny « Commandant de Brigade » sy « Chef district Soavinandriana » dia nidina tany an-toerana nijery ifotony sy namonjy ireo naratra sy nandamina ireo fokonolona. Nosamborina avy hatrany ilay zandary ka nogiazana ny basy teny aminy. Rehefa tonga teny an-toerana ny « Commandant de Compagnie Soavinandriana » sy ny « Commandant de Groupement GN Itasy », dia nandray an-tanana ny raharaha ka nanao ny famangiana ireo mana-manjo sy ireo naratra izay efa tsaboina ao amin’ny CSB2 ao Soavinandriana ary nanokatra ny famotorana.
Tatianà R. sy Ny A.